Ukuzithokozisa okujabulisayo nomuntu othandekayo, ikakhulukazi ifilimu enhle, kuyinkqubo encane eyithakazelisayo. I-cinematography yanamuhla ikuvumela ukuthi ujabulele ukudlala kobuciko abadlali, futhi phumula nje.
Noma kunjalo, yikuphi ifilimu ongayibona nomfana ekuqaleni kobudlelwane bakho? Lo mbuzo ukhathazeka izinkulungwane zamantombazane. Uma ukhetha isithombe esilandelayo sokubukwa kubalulekile ukucabangela ukuthanda kwakho ngabanye bobabili abalingani, noma kunjalo, kunezithombe ezizojabulisa yonke imibhangqwana ngaphandle kokuhlukile. Cabanga ngamafilimu amahlanu adumile kakhulu ahlobene naleli qembu:
1. Ifilimu eyodwa engakhohlwayo yesikhathi sethu, efanelekayo emibhangqweni ethandweni, iyisithombe esithakazelisayo se-"Pulp Fiction" ka-Quentin Tarantino, uma ungazi ukuthi iyiphi i-movie yokubuka nomfana, khona-ke lokhu kuzoba yisinqumo esihle kakhulu. Ifilimu yathola imiklomelo engaphezu kwengu-40 ye-movie yesimanje.
Isiqephu: inguqulo yesikrini inezingxenye eziyisithupha - izindaba eziyisithupha ezihlukene mayelana nokuphila kobugebengu ezihlangene. Izingcaphuno eziningi nezithombe ezivela kule filimu isikhathi eside zikhunjulwa yibo bonke ababukeli.
2. Yimuphi umbukiso wokubona nomyeni wakhe? Yiqiniso, i-Fast and the Furious. Idlalwa yiVin Diesel odumile, oyintandokazi yombili wesilisa nowesifazane wesigamu somuntu.
Isakhiwo: le filimu ilandisa indaba yabagibeli abaphelelwe yisikhathi. Kukhona ukulwa, ukuxosha nokudubula. Ngokumelene nalokhu konke, uthando lobuhlobo bezinhlamvu eziyinhloko luvele luvele. Le filimu iyinjabulo kakhulu, kutuswa ukuba ubukele kuphela ngekhwalithi enhle.
3. Elandelayo yamafilimu anconyelwe ukubukwa "Amamitha amathathu ngaphezu kwezulu" nguFernando Gonzalez.
Isakhiwo: indaba yothando oluhle lwabantu ababili abasha bezinhlanga ezahlukene. Ungumgibeli osemncane othanda i-adrenaline futhi ejubane, uyisimo sengqondo esithandanayo, esilandela umbono oqaphele wabazali bakhe. Ungabuka ngomphefumulo wakho womshado, ngaphandle kokungabaza.
4. I-movie elandelayo, ephendula imibuzo yamantombazane ngokuthi iyiphi i-movie yokubukela nomfana, yiqiniso, "Uthando Lwangempela". Sekuyisihloko esithombeni isithombe sothando. Umqondisi wefilimu uRichard Curtis uye wahlola inoveli kaNicholas Sparks ngokuthandana, kodwa ubuhlobo bothando obufushane.
Isiqephu: umfana othandwa kakhulu esikoleni nendodakazi yompristi wendawo, ongathathwa ngokungathí sina, athole omunye phakathi kwemidlalo yomdlalo wesikole. Umfana wenza isithembiso sokuthi ngeke athande le ntombazane, ukuze athole usizo lwakhe. Ngokwemvelo, akayigodli isithembiso, kodwa kunesizathu esenza ukuba ubudlelwane babo buvimbele. Ifilimu ikukwenza ucabange ukuthi kulula kanjani ukulahlekelwa.
5. Ngumuphi umbukiso okufanele ngibheke nomfana futhi ngihleke ngenhliziyo? Uma ukukhetha kwakho kwehla esithombeni "Iqiniso Eliphukile", lungiselela inhlamba enkulu.
Isiqephu: Ukuhlaziya okuthandwa nguRobert Luketica kuzokutshela ngalokho okulindelwe ebuhlotsheni bendoda nowesifazane. Ungumkhiqizi wesiboniso sokusa, ukuthola kalula indlela yokuphuma kunoma isiphi isimo esinzima, ngaphandle, njengoba kwenzeka, impilo yakhe. Osebenza naye, engamgundi, uyamsiza ngesikhathi esithile esinzima.
Ngakho, amantombazane abathandekayo, manje uyazi ukuthi yiliphi i-movie ongayibona nomfana!
Indlela yokuvumelanisa nentombazane?
Bhala ukuthi intombazane oyithandayo ngendlela yokuxhumana.
Indlela yokujabulisa intombazane yamaphupho akho
Ukutshalwa kwezimali Okubangelwa: lamazwe athuthukile
Njengoba slaw? Indlela uhlakaze iklabishi ngommese
Ukukhetha namafutha ukhuni impregnation. Mineral amafutha zibe yizinkuni
Amaqiniso avela ku-biography kanye negama langempela lomuthi kaKhisimusi